VidioCoin စျေး - အွန်လိုင်း VDO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို VidioCoin (VDO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ VidioCoin (VDO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ VidioCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
VDO – VidioCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ VidioCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
VidioCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VidioCoinVDO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00617VidioCoinVDO သို့ ယူရိုEUR€0.00524VidioCoinVDO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00473VidioCoinVDO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00565VidioCoinVDO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0562VidioCoinVDO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.039VidioCoinVDO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.137VidioCoinVDO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.023VidioCoinVDO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00824VidioCoinVDO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00863VidioCoinVDO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.141VidioCoinVDO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0479VidioCoinVDO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0328VidioCoinVDO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.463VidioCoinVDO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.03VidioCoinVDO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00848VidioCoinVDO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00934VidioCoinVDO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.192VidioCoinVDO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0431VidioCoinVDO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.653VidioCoinVDO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.38VidioCoinVDO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.34VidioCoinVDO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.454VidioCoinVDO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.172
VidioCoinVDO သို့ BitcoinBTC0.0000005 VidioCoinVDO သို့ EthereumETH0.00002 VidioCoinVDO သို့ LitecoinLTC0.000108 VidioCoinVDO သို့ DigitalCashDASH0.00007 VidioCoinVDO သို့ MoneroXMR0.00007 VidioCoinVDO သို့ NxtNXT0.509 VidioCoinVDO သို့ Ethereum ClassicETC0.00087 VidioCoinVDO သို့ DogecoinDOGE1.83 VidioCoinVDO သို့ ZCashZEC0.00007 VidioCoinVDO သို့ BitsharesBTS0.237 VidioCoinVDO သို့ DigiByteDGB0.235 VidioCoinVDO သို့ RippleXRP0.0208 VidioCoinVDO သို့ BitcoinDarkBTCD0.000219 VidioCoinVDO သို့ PeerCoinPPC0.0223 VidioCoinVDO သို့ CraigsCoinCRAIG2.89 VidioCoinVDO သို့ BitstakeXBS0.271 VidioCoinVDO သို့ PayCoinXPY0.111 VidioCoinVDO သို့ ProsperCoinPRC0.797 VidioCoinVDO သို့ YbCoinYBC0.000004 VidioCoinVDO သို့ DarkKushDANK2.04 VidioCoinVDO သို့ GiveCoinGIVE13.75 VidioCoinVDO သို့ KoboCoinKOBO1.45 VidioCoinVDO သို့ DarkTokenDT0.00569 VidioCoinVDO သို့ CETUS CoinCETI18.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 19:25:02 +0000.